PressReader - Isolezwe: 2017-09-15 - ‘Owagenca’ umyeni ngegeja usatokile
‘Owagenca’ umyeni ngegeja usatokile
Isolezwe - 2017-09-15 - IZINDABA - ZANELE MTHETHWA
UMNDENI wowesifazane oboshelwe icala lokubulala umyeni wakhe okuthiwa wamgenca ngegeja KwaNkombose, eMtubatuba, uthi awukaze ubonane naye njengoba uqhubeka namalungiselelo omngcwabo ozoba ngale mpelasonto.
UMnuz Siyabonga Sikhakhane oyindodana kaNkk Zamekile Sikhakhane (58) ongumsolwa kuleli cala, uthe usazobhunga nomndeni ngokuthi kumele yini bayobona unina esitokisini ngaphambi komngcwabo ozoba ngoMgqibelo.
UNkk Sikhakhane usolwa ngokugenca umyeni wakhe uMnuz Wilson Mcumbaza Sikhakhane (74), ngoLwesibili olwedlule. Umsolwa wazinikela emaphoyiseni ngosuku lwesehlakalo.
UNkk Sikhakhane uvele eNkantolo yeMantshi KwaMsane ngoLwesine olwedlule, icala lahlehlela inamuhla.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uColonel Thembeka Mbhele, uthe umsolwa ubhekene necala lokubulala umyeni wakhe owatholwa enamanxeba amaningi emzimbeni.
Ukuqinisekisile ukuthi uvelile enkantolo ngoLwesine olwedlule kodwa asikaziwa isizathu esiholele kulesi sigameko.
Indodana kamsolwa ithe ayikwazanga ukuya enkantolo ngoLwesine.
“Ngafika umama sekuthiwa udluliselwe esitokisini eHluhluwe, esevelile enkantolo. Bengifisa ukumbona ngaphambi kokuthi singcwabe ubaba njengoba kumanje ngisadidekile ukuthi yini engamenza abulale. Nokho ngeke ngikwazi ukuzithathela izinqumo ngoba kumele ngixoxe nabadala emndenini. Okwamanje simatasa namalungiselelo okufihla ubaba kodwa sidonsa kanzima ngenxa yemali engekho. Umphakathi ubambisene nathi ngoba abanye bazonikela ngetende nekhansela lithembise ngokuletha amanzi ngoba sinenkinga yawo endaweni,” kuchaza uSikhakhane.
Uthe akazi nokuthi bazokwazi yini ukuhlanganisa imali yebheyili kanina ngoba naye akasebenzi, ubethembele empeshenini kayise.
USikhakhane wayephuma edolobheni ngoLwesibili ngesikhathi ethola izindaba zokushona kukayise.
Uthe wafica unina endlini, wambingelela wangavuma, wathi uma eya ekamelweni wazithela kuyise elele embhedeni enamanxeba okugencwa.
Umufi waphuthunyiswa emtholampilo kwaMsane kwatholakala ukuthi useshonile.
Umndeni kamsolwa uveze ukuthi wake waphanjanelwa wumqondo futhi ubelokhu ekhala ngokhwantalala kusukela kwashona indodana yakhe eyayisanda kuqeda u-matric.
LE tekisi ishayisane nenye izolo ekuseni eNew Germany kwalimala umuntu obezihambela ngezinyawo
UMNUZ Wilson Sikhakhane ozongcwatshwa ngoMgqibelo, umkakhe osolwa ngokumgenca ngegeja usagcinwe ezitokisini